‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ’ कार्यक्रममा मनमोहन र माधवलाई सम्झाउन हम्मे - विचार - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ’ कार्यक्रममा मनमोहन र माधवलाई सम्झाउन हम्मे
भरतमोहन अधिकारी फागुन १९
नेकपाका बरिष्ठ नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको ८२ बर्षको उमेरमा शनिबार (१८ फागुन) निधन भयो। ०७ देखि नै राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय रहेका बरिष्ठ नेता अधिकारी चार पटक अर्थमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भए।
तर, एमालेको ९ महिने अल्पमतको सरकार काल (२०५१–५२) मा अर्थमन्त्री हुँदा अधिकारीले बजेट बक्तव्यमार्फत् ल्याएको ‘आफ्नो गाउँ, आफै बनाऊँ’ कार्यक्रम र बृद्धभत्ता कार्यक्रम विशेष स्मरणीय रहे। यी दुई कार्यक्रमले अधिकारी र एमाले दुबैलाई जनताबीच लोकप्रिय बनायो।
शनिबार राति अधिकारीको निधन भएपछि सामाजिक सञ्जाल र अन्यत्रपनि नेपालीहरुले उनी अर्थमन्त्री हुँदा ल्याइएको ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ’ र ‘बृद्धभत्ता’ कार्यक्रमसँगै अधिकारीको स्मरण गरेका छन्।
गाउँ विकासको सबैभन्दा प्रभावकारी बनेको ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ’ कार्यक्रम उनी अर्थमन्त्री हुँदा कसरी ल्याएका थिए, कस्तो कस्तो चुनौति बेहोर्नु परेको थियो? भन्नेबारे नेपालखबरका विशेष संवाददाता मणि दाहालले गत जेठमा अधिकारीसँग कुराकानी गरेका थिए।
प्रस्तुत छ, उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः
२०५१ मंसिरमा नेकपा (एमाले) अल्पमतको सरकार बन्यो। पार्टीले मलाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दियो। नयाँ सरकार गठनसँगै नयाँ बजेट बनाउने विषय आयो। सरकारमा हुँदा केही न केही रचनात्मक काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो। के हुनसक्छ भनेर सोच्ने काम भयो।
लामो समयदेखि गाउँमाथि अन्याय हुँदै आएको थियो। त्यसैले, गाउँलाई अघि बढाउनु पर्छ भन्ने सोच थियो। त्यसैले ‘सिधै गाउँमा पैसा पुग्ने गरी काम शुरु गरौँ’ भन्ने लाग्यो।
शुरुमा प्रत्येक गाउँ विकास समितिलाई पाँच लाख रुपैया रुपैयाँ दिने सोच थियो। पार्टीका महासचिव माधवकुमार नेपाल उप–प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यो कार्यक्रम शुरु गर्नु पर्दा उहाँसँग स्वीकृत लिनै पर्ने थियो। जब गाउँलाई पाँच लाख रुपैया दिने कुरा गरेँ, उहाँले ‘यस्तो नचाहिने कुरा गर्ने?’ भनेर हकार्नुभयो। ‘पैसा कहाँबाट ल्याउनु हुन्छ? सबै पैसा भ्रष्टाचार हुन्छ’ भन्दै उहाँले मान्दै मान्नु भएन।
मलाई भने यो जसरी पनि यो काम गर्ने हुटहुटी थियो। प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई भेट्न बालुवाटार गएँ। उहाँ पार्टी अध्यक्ष पनि हुुनुहुन्थ्यो। ‘यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउछौ?’ भनेर सोध्नु भयो। तर ‘जसरी पनि कन्भिन्स गर्छु’ भन्ने थियो।
त्यसपछि अन्य दौतरीहरुसँग यस विषयमा छलफल थालेँ। धेरैसँग ‘गाउँ विकास समितिलाई पाँच लाख रुपैया दिँदा कस्तो होला?’ भनेर सोधेँ। सबैले ‘राम्रो-राम्रो ’भन्नुभयो। तर दुई जनाले विशेषगरी उत्साहित पार्ने काम गर्नुभयो- केशव बडाल र गुरु बरालले।
बडालले ‘यो काम अहिले नै गरिहाल्ने हो, तपाई तयारी गर्नुहोस्, अध्यक्ष र महासचिवलाई मनाउने जिम्मा हाम्रो भो’ भन्नुभयो। ‘बजेटमा यो विषय राख्नुहोस्’ भन्नुभयो। गुरु बरालले पनि ‘हुन्छ’ भन्नुभयो, यसैमा लाग्नुस, मनमोहन र माधवको पछि हामी लागौँला’ भन्नुभयो।
त्यसैले, गाउँको विकासका लागि त्यो गर्नुपर्छ भन्ने विचार मैले ल्याएको हो, यसलाई उज्यालो घाम देखाउने उहाँहरु दुई जना हो। नेताको स्वीकृति नभइ दुई अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम अघि बढाउन सकिने अवस्था थिएन। मनमोहन दाई र नेताहरुले मान्दैनथे भने मैलेमात्र त्यो कार्यक्रम ल्याउन सक्दैनथेँ। बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा माधव कमरेडले फोन गरेर स्वीकृत दिनुभयो।
अर्थ सचिवले आएर पाँच लाख रुपैयाँ नपुग्ने जानकारी गराउनु भयो। ४ लाख रुपैयाँ राख्ने कुरा भयो। डिल्लीराज खनाल सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँले ४ लाख रुपैयाँ पनि नसक्ने जानकारी गराउनुभयो। त्यसपछि तीनमा झरियो।
त्यो कार्यक्रमले तहल्का मच्चायो। नेपाली कांग्रेसको आरोप ‘भरतमोहनले लुटायो-लुटायो’ भन्ने थियो। उनीहरुले ‘कनिका छ¥यो’ पनि भने। कुकुरलाई जसरी गाली गरिन्छ नि, संसदमा मलाई पनि त्यसैगरी गाली गरे।
हृदेयश त्रिपाठीले त्यो बेला सद्भावना पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आएर मसँग भन्नुभयो, ‘गाउँमा यतिको पैसा कहिले देखिएको थिएन।’
यो कार्यक्रमको बढी दुरुपयोग महोत्तरी, सिराहा, सप्तरी जस्तो जिल्लाहरुमा भए। तर पहाडी जिल्लामा त्यस्तो भएन। पहाडतिर त्यसले धेरै काम पनि ग¥यो। बाटो बनायो, स्कुल चलायो, धेरै काम भयो।
एक दिन जर्मन राजदूत भेट्न आउनुभयो, उहाँले ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ’ कार्यक्रम राम्रो भएको भन्दै जर्मनले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। दक्षिण कोरियाका राजदूतले समेत सहयोग गर्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिले एमालेले कम्युन बनाउन लाग्यो भनेर मलाई भनेर सुनाइएको थियो, तर होइन रहेछ, राम्रो काम रहेछ, हामी पनि सहयोग गर्छौं।’
विश्व बैँकको ‘वर्ल्ड रिपोर्ट’ मा समेत यो कार्यक्रमलाई नेपालमा पचास वर्षयता विकासको क्षेत्रमा सबैभन्दा राम्रो कार्यक्रम’ भनेर प्रसंशा गरिएको छ।
फूल चढाएर स्व अधिकारीप्रति सम्मान प्रकट गरिँदै
मन्त्री हुँदा पोखरा जाँदै थिएँ। बाटोमा ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ’ कार्यक्रम अन्तर्गत जनताले बाटो बनाउँदैछन् भन्ने जानकारी पाएँ, म आफै हेर्न गएँ। त्यहाँ सबै उमेरका १२-१५ सय मानिस सामलतुमल बोकेर काम गर्दै थिए। केन्द्रबाट पठाएको त जम्मा तीन लाख रुपैयाँ मात्र थियो, तर श्रमदानबाट भने १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भएको थियो।
त्यसभन्दाअघि बजेट भनेको व्यापारीले सुन्ने र ‘भन्सार दर कति बढ्यो’ भन्ने विषयको रुपमा रहेको थियो। मैले ल्याएको त्यो बजेटपछि जनताले आफ्नो गाउँमा आउने बजेट कति बढ्यो भनेर सुन्न थाले। विकास निर्माणको काममा चाख बढ्यो। त्यसले मनोवैज्ञानिक रुपमा फरक पर्‍यो।
पछिको अवस्था के भयो भने, शुरुमा बजेट दिँदा मलाई गाली गर्नेहरुले नै पछि (गाउँमा जाने रकममा) आफैँ बजेट बढाउँदै लगे। यो त ‘अपरिवर्तनीय परिवर्तन’ जस्तो भयो।
बाटो बनाउँदा डोजर लगाए, डोजरको प्रयोगले पहिरो पनि गयो। यसमा विकृति पनि आयो। पहिलो कार्यक्रम बनाउँदा गाउँ विकास समितिले सबै राजनीतिक दलहरुसँग सहमतिमा कार्यक्रम बनाउने गरी तय गरिएको थियो। सबैले देख्ने गरी कुन कार्यक्रममा कति खर्च भयो भनेर लेखेर राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेका थियौँ। त्यो व्यवस्था पछि हट्यो।
हामी सरकारबाट हट्यौँ, त्यसपछि बनेको सरकारले यो कार्यक्रम अन्तर्गत ‘कमाउने’ (भ्रष्टाचार गर्ने) स्थान दिँदै गयो। अध्यक्षलाई १५ प्रतिशत प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च पाउने गरी व्यवस्था गर्‍यो। सो रकमबाट ठेक्का लगाउने व्यवस्था गरियो। गाउँ विकास समितिको खातामा सिधै जम्मा गर्ने भन्दा पनि जिल्ला विकास समितिलाई बढी शक्तिशाली बनाउने काम भयो।
प्रकाशित १९ फागुन २०७५, आइतबार | 2019-03-03 13:03:58
भरतमोहन अधिकारीबाट थप